Jereo ny fomba hisafidianana hotely tsara indrindra aleha amin'ny ankizy | Vaovao momba ny dia
Ny fandaminana dia hataonao mianakavy dia mety ho sarotra tokoa noho ireo fiovana rehetra tsy maintsy raisintsika. Tena zava-dehibe ny toerana sy ny toeram-ponenana mifanaraka amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe mitovy amin'izany mba hahafahan'ny fianakaviana iray manontolo mankafy ilay dia. Ny fifidianana ny trano fandraisam-bahiny tsara indrindra ho an'ny ankizy dia sarotra, indrindra raha tsy fantatsika izay hotadiavina.
Manaraka izany dia holazainay aminao ny sasany amin'ireo zavatra tadiavina ao a hotely tsara ho an'ny fianakaviana manan-janaka. Zava-dehibe ny fananana ireo serivisy ireo sy teboka mazava tsara raha hanao fikarohana manokana ary hanary ireo hotely sy trano hipetrahanay.
1 Safidio ny toerana haleha
2 Fihenam-bidy ho an'ny ankizy
4 Fitaovana ho an'ny ankizy
5 Ny klioban'ny zaza
6 famerenana amin'ny laoniny
7 Serivisy manokana
8 Fiarovana amin'ny hotely
9 Serivisy fitaizan-jaza
Zava-dehibe ny misafidy toerana tsara ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Misy toeran-tany tena mahazatra ary izany no mahatonga antsika ho mora kokoa amintsika ny mahita trano fandraisam-bahiny miaraka amin'ity karazana serivisy ity mikendry ny ankizy kely. Ny toerana halehany dia tokony hahaliana ny olona rehetra, na noho ny hetsika na noho ny toerana hahitana azy. Amin'ny tranga maro dia tadiavina ny trano fandraisam-bahiny izay mampiala voly ny ankizy fa tsy mihevitra izay ho hita eo amin'ny toerana haleha. Miankina amin'ny karazana fizahantany tiantsika hatao miaraka amin'ny ankohonana izany.
Fihenam-bidy ho an'ny ankizy
Amin'ny hotely maro dia manolotra fihenam-bidy ho an'ny ankizy izy ireo. Betsaka ny manolotra trano onitra maimaim-poana zaza latsaky ny roa ambin'ny folo taona. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy jerenao tsara ny fepetra ahafahana manararaotra ny tolotra ary mandeha amin'ny vidiny ambany. Ho fanampin'izany, raha toa ka fianakaviana lehibe dia sarotra ny raharaha, satria ireo tolotra ireo dia matetika ho an'ny fianakaviana tokana ny zanany.
Zava-dehibe ny misafidy ny efitrano. Ireo dia mety ho nozaraina tamin'ny ray aman-drenin'izy ireo na azo ampitaina koa izy ireo raha toa ka lehibe ireo zaza. Tsy maintsy jerenao raha manana fandriana fanampiny izy ireo raha toa ka mihoatra ny iray zaza ary raha manolotra fandriana ho an'ny zazakely izy ireo, noho io fomba io dia azo atao ny mamonjy mandeha miaraka amina fandriana fandehanana.
Amin'ny trano fandraisam-bahiny rehetra ao amin'ny fianakaviana dia matetika izy ireo no manana fotodrafitrasa hahafahan'ny ankizy miala voly sy miala voly. Ireo fotodrafitrasa ireo dia mety Kianja filalaovana anatiny sy ivelany, dobo ho an'ny ankizy, valan-drano, efitrano fahitalavitra na lalao video. Mila mitady trano fandraisam-bahiny misy fialamboly ho an'ny ankizy ianao ary mijery manokana ny hevitry ny mpandeha sy ny sary raha toa ka ampy ho an'ny ankizy izy ireo.
Ny klioban'ny zaza
Ny klioban'ny ankizy dia hevitra tsara hankafizan'ny ankizy. Manana an'ireto izy ireo hetsika natao ho an'ny sokajin-taonany, lalao sy mpiasa mikarakara azy ireo raha olon-dehibe kosa afaka mankafy ny fotodrafitrasa fandraisam-bahiny toa ny spa. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny maro dia manana elanelam-potoana ny klioba, mba hahafahan'ny ankizy misaraka amin'ny taona ka omena hetsika mifanaraka amin'ny sehatra misy azy ireo. Ity dia iray amin'ireo serivisy mahaliana indrindra rehefa mifidy hotely.
Na dia ao amin'ny ankamaroan'ny hotely lehibe aza ny menu miovaova na dia amin'ny buffet azaAo amin'ny trano fandraisam-bahiny maro izay tantanan'ny fianakaviana dia manana menus an'ny ankizy izy ireo. Amin'izany fomba izany, ny ray aman-dreny dia mamonjy ny tenany amin'ny fiatrehana ireo ankizy izay tsy te hihinana lovia tsy fantany. Amin'ny trano fandraisam-bahiny sasany dia misy aza ny mpiasa mikarakara ny faritry ny ankizy mba hahafahan'ny ray aman-dreny misakafo am-pilaminana raha mankafy ny sakafo any amin'ny faritra misy azy ireo ny ankizy.
Hotely maro no manolotra serivisy manokana ho an'ny zazakely ary koa ho an'ny tanora. Matetika ny serivisy dia mifantoka amin'ny ankizy lehibe, manadino ny momba ny zazakely na ny tanora. Na izany aza, hotely sasantsasany izay manome antsipiriany bebe kokoa harona fandroana zaza misy lahatsoratra ho azy ireo, fandriana na seza avo arakaraka ny fangatahana. Misy ihany koa hotely izay eritreretin'izy ireo momba ny zatovo ary ananany hetsika manokana ho azy ireo toy ny faritra lalao video, atrikasa na hetsika fanaovana fanatanjahantena.
Fiarovana amin'ny hotely
Ankoatra ny hetsika izay azo faritana amin'ny trano fandraisam-bahiny, ilaina ny manisy fiheverana ny fiarovana ao amin'ny hotely. Mila mijery akaiky ny hevitra momba ny fahadiovan'ny toerana, ary koa amin'ny sary. Ny fiarovana ny lavarangana na ny varavarankely, ny làlambe ary indrindra ny faritra ho an'ny ankizy, manomboka amin'ny dobo filomanosana ka hatrany amin'ny kianja filalaovana. Betsaka ny trano fandraisam-bahiny manolotra serivisy nefa tsy miraharaha ireo karazana antsipirihany ireo izay mety hanjary ilaina rehefa mandeha miaraka amin'ny ankizy kely.
Ity dia serivisy tadiavin'ny ray aman-dreny maro ao amin'ny hotely hahafahany mankafy andro iray na alina mivoaka tsy manahy momba ny ankizy. Mila foana ianao alao antoka ny karazana serivisy Ny zavatra aroson'izy ireo, raha amin'ny ora iray ary iza no hikarakara ny ankizy. Azonao atao ny miantso ny hotely raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ity serivisy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy » Fomba hisafidianana hotely hiarahana amin'ny ankizy
Toerana 6 ao amin'ny Catalan Pyrenees izay tokony ho hitanao
Inona no hatao any Benidorm